Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2021 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အက္ခရာသည်စာဖြင့်ရေးသားထားသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်သာမန်အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ အမှန်ကတော့အထူးသဖြင့်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုတွင်ရေးသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အက္ခရာအများစုသည်အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းပါလေ့ရှိသည်။ ဤသည်ပြည်တွင်းရေးဖွဲ့စည်းပုံမှာအားသာချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ သူ၏အရေးအသားအစီအစဉ်သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သိသာထင်ရှားတဲ့, ရည်မှန်းချက်ပေးထားအပြောင်းအလဲများရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်၊ လျှောက်လွှာတစ်ခုသို့မဟုတ်တိုင်ကြားချက်အတွက်ပင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာပေးစာယူရေးသားခြင်းအစီအစဉ်သည်လက်တွေ့ကျမည်မဟုတ်ပါ။
အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ် - အောင်မြင်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာအတွက်အဆင့်သုံးဆင့်ပါသောအစီအစဉ်
အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်ကိုဤသက္ကရာဇ်စဉ်အစဉ်အလာအရအသုံးပြုခြင်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အက္ခရာ၏ရေးသားခြင်းအစီအစဉ်၏သုံးပွင့်ဆိုင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်အခြေအနေအားလုံး၌အကောင်အထည်ဖော်ရန်ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းထုတ်ရန်၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုပို့ဆောင်ရန်၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုရှင်းပြရန်သို့မဟုတ်သင်၏စာဖတ်သူကိုပင်ဆွဲဆောင်ရန်။ နှင့်ပတ်သက်။ အပြစ်လွတ်သောထိရောက်မှုယုတ္တိအမိန့် ယင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာလေ့လာသည်။
အတိတ် - အစီအစဉ်နံပါတ် ၁
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေးထုံးတမ်းစဉ်လာအရ၊ ကန ဦး သို့မဟုတ်ယခင်အခြေအနေအပေါ် အခြေခံ၍ အက္ခရာအများဆုံးရေးသားလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်လက်ခံရရှိသည့်စာ၊ အစည်းအဝေးတစ်ခု၊ လည်ပတ်မှု၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့်အင်တာဗျူးစသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤစာ၏ပထမပိုင်းကိုရေးသားရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပေးပို့ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်အတော်လေးရိုးရှင်းစွာအခွအေနေဖော်ပြ။ အချက်အလက်များ၏သတိပေးချက်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်တူညီသောဝါကျတွင်ဖော်ပြသည်။ သို့သော်ဝါကျများကိုဤဝါကျတည်ဆောက်ရန် ပို၍ အဆင်ပြေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါဖော်ပြချက်များရှိသည် -
XXX သတင်းစာမှထုတ်ပြန်သောသင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (ရည်ညွှန်းအမှတ် ၁၂၃၄၅) အရကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည်မှာ ...
စာအရေးအသား၏အကြောင်းပြချက်သည်အတိတ်ကအချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်သောအခြေအနေများတွင်။ ထိုအချိန်တွင်စာရေးသူကိုယ်တိုင်သူနှင့်သူတည်ထောင်ခဲ့သောမိတ်ဆက်သည့်စာ၏ပထမစာပိုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ထို့နောက်သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုဖော်ပြခြင်း (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံခြင်း (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအဆိုပြုလွှာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါဖော်ပြချက်များရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်စီစဉ်ထားကြောင်းကြေငြာရန်အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။
အလိုအလျောက်လျှောက်ထားခြင်း (အလုပ်သင်သို့မဟုတ်အလုပ်) ၏အခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါစကားရပ်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
အစီအစဉ်၏ဤဒုတိယအပိုင်းသည်ပထမအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောယခင်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်တီတွင်စာရေးသားခြင်းကိုအကြောင်းပြသည့်အကြောင်းရင်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤအဆင့်တွင်၎င်းသည်ငြင်းခုံခြင်း၊ သတင်းပေးခြင်း၊ ရှင်းပြခြင်းသို့မဟုတ်မေးမြန်းခြင်းအတွက်ဖြစ်စေမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေအနေ၏ရှုပ်ထွေးမှုပေါ် မူတည်၍ ဤအပိုင်းကိုအပိုဆောင်းစာပိုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဝါကျတစ်ခုတည်းတွင်အဓိကအယူအဆကိုရေးသားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါဖော်ပြချက်များရှိသည် -
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ခြင်းကသင့်ကိုအာမခံသည်။
အနာဂတ် - အစီအစဉ်နံပါတ် ၃
ဤတတိယနှင့်နောက်ဆုံးအပိုင်းသည်သတင်းပို့ခြင်းဖြင့်ပထမအပိုင်းကိုပိတ်သည် နောက်ဆက်တွဲ လာကြ၏။
ကျနော်တို့အစားထိုးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ... သင်တန်း၏မူလအကောင့်ကိုယူပြီး။
တစ်ခုခုကိုငါတို့ဆန္ဒဖော်ပြ, ဒါမှမဟုတ်လက်ခံသူပြုမူသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ရန်လက်ခံရရှိသူကိုအားပေးသို့မဟုတ်အားပေး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါဖော်မြူလာများရရှိနိုင်သည် -
စာချုပ်၏အထွေထွေနှင့်တိကျသောပြဌာန်းချက်များအရအခြေအနေကိုတတ်နိုင်သမျှမြန်မြန် (ရည်မှန်းချက်) ချိန်ညှိပါလိမ့်မည်။ (အငြင်းအခုံ)
ကျွန်တော့်ပို့ဆောင်ရေးကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးနိုင်မလား ? (ရည်မှန်းချက်) သင်၏ရောင်း ၀ ယ်မှုအခြေအနေကိုကြည့်ရှုရန်သတ်မှတ်ထားသောနေ့၌ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသင့်အားမမေ့သင့်ပါ။ (အငြင်းအခုံ)
သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အက္ခရာပိတ်ဖို့ရန်မရှိမဖြစ်တစ် ဦး ယဉ်ကျေးပုံသေနည်း !
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာတစ်စောင်ကိုမှန်ကန်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ရန်အတွက်ယဉ်ကျေးသောစကားစုကိုရေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အမှန်တကယ်တွင်၎င်းသည်စကားဝှက်ပါ ၀ င်သည့်ယဉ်ကျေးသောနှစ်ထပ်ယဉ်ကျေးသောဖော်မြူလာဖြစ်သည်။
ကောင်းစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အက္ခရာရေးသားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2021Tranquillus
လွန်ခဲ့သောလျော်ကြေးနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုစရိတ် - နှုန်းဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရွှေ့ဆိုင်းခြင်း
အောက်ပါ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်၊ စုပေါင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှု - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရွေ့လျားမှုအတွက်ကိရိယာအသစ် Transco ဆိုသည်မှာ ၀ န်ထမ်းများအားစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကဏ္inများတွင်အလုပ်များသည့်အခါဖွံ့ဖြိုးဆဲလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောစက်ဖြစ်သည်။